Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - hfm-Alarobia
Alarobia Antso ho amin’ny fitarihana
INONA IREO FEPETRA TAKIANA?
Tantara milaza ny amin'ny tovolohy iray no ambara, voalaza fa tena tia mitondra fiara mpiazakazaka mande mafy, sy mande amin'ny làlana miolakolana an-tendrombohitra izy ity. Indray andro dia nisy fiara iray nifanena taminy teo amin'ny fiolanana izay tsy hifankahitana mihitsy. Naka ny faritry ny ampahan'ny làlany ilay fiara, ary rehefa nifanena ireo dia namoaka ny lohany teo amin'ny varavaran-kely ilay mpitondra ilay fiara sady nikiakiaka hoe: "kisoa!"
Tena tezitra izy! “kisoa!” hoy izy namaly mafy. “Taty amin'ny ampahan'ny làlako anie izy e,” hoy izy tsy tonga saina. “Nahoana no dia sahany niantso ahy ho kisoa!” Ny hany tena nahafa-po azy dia ny nahafahany namaly ilay olona tamin'izay noheveriny fa tokony namaliana azy.
Dia niodina tamin'ilay fiolanana tsy hifankahitana izy—ary dia voadonany ilay kisoa izay nijoro teo am-povoan-dàlana!
Matetika ny fandrahonana hita maso dia fampitandremana tena manampy tokoa. Ny Tompontsika dia mahita mialoha sady foana izay hiseho ao amin'ny kion-dàlana amin'ny ho avy. Amin'ny krizy rehetra dia tiany ny mampandre antsika ireo loza ary maneho amintsika ny fahafahana misokatra raha mihaino ny Teniny isika.
Mahita “kisoa” lehibe tokoa aho eo amin'ny làlan'ireo kristianina mivelona amin'izao andro farany izao. Maro no manaraka ny ohatry ny kolotsaina mba "hanao izay tsara eo imason'ny hafa" noho ny mitodika amin'ny Tenin'Andriamanitra.
Raha hifanena amin'ny hora farany ity tany ity, Andriamanitra kosa dia manana drafitra mampangitakitaka sy tena mijoro ho an'ny tsirairay avy amintsika. Miantso ahy sy ianao Izy mba ho tonga mpitarika mahasintona, mandefa antso hoe: "Mialà aminy [Babylon] hianareo, ry oloko” (Apôk. 18:4).1 Ny hany sakana tokana izay mijoro eo amin'ny làlana dia tsy inona fa ny safidintsika hamaly ny fampitandremana.
Ny ohatr’i Nehemia
Nehemia dia ohatra matanjaka ny amin'ny fitantanana izay hiantsoan'ny Tompo ny tsirairay amintsika.
Raha vao nahita an'i Nehemia isika, dia fantatra fa nanompo tao amin'ny mpanjakan'ny Persianina, Artaksersesy toy ny mpitondra lovia izy. Na dia nitàna anjara toerana lehibe tao amin'ny fanjakan'ny Persianina akory i Nehemia, ary nohodidinin'ny harena, ny fony kosa dia tany amin'ny Rainy izay any an-danitra foana ary ny olona izay nomena ny Teny masina.
Lasan-ko babo ireo razam-ben'i Nehemia rehefa nopotehan'ny Babylôniana i Jerosalema 70 taona talohan'izany. Ankehitriny raha eo ambanin'ny làlan'ny ampira Persiana ny Hebreo, dia nahazo alàlana hiverina amin'ny taniny, fahatanterahan'ny teny fikasan'i Jehovah izay nomeny ny zanak'Israely taona maro lasa (Jer. 29:10).
Maro no lasa zatra tamin'ny fitoerany tamin'io tany io ka nisafidy hitoetra ao ihany. Sarotra tokoa mantsy ny hoe hanorina fonenana avy amin'ny tsy misy indray. Mila mpitarika izay mametraka ny asa fanompoana sy fanajana an'Andriamanitra ambonin'ny zavatry ny tany ny Tompo.
Tonga niaraka tamin'ny vaovao ratsy mahakasika ny toetoetry ny ao Jerosalema ireo hiraka: “Ny sisa tamin’ny fahababoana izay any amin’ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa; ary voarodana ny màndan’i Jerosalema sady nodoran’ny afo ny vavahadiny” (Neh. 1:3).
Vaky fo Nehemia ary nitodika tamin'ireo loharano fanampiana anan-kiroa: ny vavaka sy ny Tenin'Andriamanitra. Nitomany izy, nifady haninina, nivavaka, ary nangataka famelan-keloka ho amin'ny fahotany sy ny fahotan'ireo vahoaka. Avy eo dia nidera an'Andriamanitra izy ny amin'ny fahatokiany amin'ny Teniny ary nahazo hery tamin'ny Teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny famindram-po sy famerenana indray amin'ny laoniny ny zava-drehetra raha toa ka miverina aminy amin'ny fibebahana am-pinoana ireo olony. (and. 5-11).
Toro-làlana amin’ny alalan’ny Vavaka
Nandritra ny efa-bolana dia namelatra ny fony teo amin'Andriamanitra i Nehemia. Dia nanome iraka ho azy ny Tompo. Nantsoina hitarika ny fanamboarana indray an'i Jerosalema i Nehemia. Nivavaka tamin'i Jehovah izy, “ary hambinina anie ny mpanomponao anio, ary aoka hahazo famindrampo eo imason’io lehilahy io aho [ny mpanjaka]” (and. 11). Dia niandry izy.
Tamin'izany fomba izany ihany koa no nahitan'i Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Tamim-pianarana am-bavaka ny Tenin'Andriamanitra dia nahazo fahalalana mazava ny amin'ny iraka amin'ny maha-Mpanavotra Azy Izy. Nianatra ny sitrapon'ny Rainy isan'andro Izy, tahaka an'i Nehemia, sy tahaka antsika ihany koa.
Fifantohana tanteraka tamin'ny Tenin'Andriamanitra sy vavaka no tena nameno ny fotoanan'ireo mpianatra raha teo am-piandrasana ny firotsahan'ny Fanahy Masina ( Asa 2). Deraina Jehovah noho ny fihetsehan'ny Fanahiny eo amin'ny fiainantsika mba hitondra fahendrena, fahalalana, fanomezam-pahasoavana, ary fahazotoana ho an'ny famonjena ireo izay fantatsika sy ireo izay handefasan'Andriamanitra antsika.
Faritra hiantefan’ny hery miasa manginan’ny tsirairay
Indray andro dia hitan'ny mpanjaka Artaksersesy ny hendrika manjombona teny amin'i Nehemia dia nanontany ny anton'izany izy. Nolazain'i Nehemia tamin'ny mpanjaka ny fihilavany vahoakany any Jerosalema. "Inona ary no hangatahinao" hoy ny mpanjaka. Novelarin'i Nehemia avy hatrany ny listry ny faniriany ary azony avokoa izany rehetra izany. (Neh. 2:2-8).
Tsy mpiasa tena na mpanao mari-trano akory i Nehemia. Tsy nande nianatra tany amin'ny fianarana "mpanao lalàna" izy. Kanefa dia mbola nomen'Andriamanitra iraka ho any Jerosalema ihany ary voatondro ho mpitarika mihitsy.
Ao amin'ny bokin'i Ellen White sy ny Fianarana ho Mpitarika: Fitarihana ho an'ireo izay misy hery miasa mangina amin'ny hafa, mpanoratra iray atao hoe Cindy Tutsch, tale mpanampy ao amin'ny Faritry ny Fotsy hoditra, dia nanoratra hoe: “Raha kristianina ianao dia mpitarika! Anisan'ny andraikitsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy ny mampiasa ny hery miasa mangina ananantsika hitarihana ny hafa hanaraka an'i Jesosy. Ataontsika amin'ny fomba hafa izany, mifanaraka indrindra amin'ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Kanefa raha tsy mbola nihidy tao an'efitra mihidy iray ianao nandritry ny 10 taona lasa ka tsy nahita olona nandritra izany fotoana izany, dia misy olona tokoa eo amin'ny fiainanao.”2
Ny fahaiza-mitarika dia tena mahasintona ny olona tokoa—ny zanakao, ny fianakavianao, ny namanao, ny mpiara-miasa aminao, ny mpiray vodirindrina aminao. Miantso anao ho tonga Nehemia Jesosy, olona iray izay maniry ny ahita an'Andriamanitra sy ny Teniny amim-bavaka isan'andro mba ahazoany manome anao ny fanomezam-pahasoavan'ny asa fitarihana. Manomana vahoaka ho any an-danitra Izy ary maniry hampiasa ny hery manintona avy ao aminao hitarika ny hafa ho amin'ny fifohazam-panahy marina.3
Mitarika ho amin’ny fahombiazana
Ny ohatra napetrak'i Nehemia dia lesona ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, mampianatra antsika fa tsy tokony hivavaka fotsiny ihany, fa hametraka drafitr'asa ampahendrena sy hiasa mafy. Azon'i Nehemia ny tenin'ny Tompo nomena an'i Zerobabela: “ ‘Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin’ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” (Zak. 4:6). Fa fantany tamin'ny alalan'ny fanandramana fa ny lehilahy sy ny vehivavin'ny fivavahana dia mino amin'ny asa, ary ny drafitr'asa voahevitra sy matotra tsara dia zava-dehibe ho amin'ny fahombiazan'ny ezaka ara-panahy ho an'ny Tompo.
Raha vao tonga tao Jerosalema i Nehemia, dia niodina izy mba hijery ny toe-piainana tao. Nalahelo mafy ny fony raha nahita ny faharavana tao. Ngazana tanteraka ny fahitana ny hivelany. Fa naharesy ny fon'ny vahoaka kosa izy raha nihevitra ny amin'ny valim-bavaka sy ny antony lehibe nitarika azy tao Jerosalema. Hoy ireo vahoaka, resy lahatra: “Eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy.” (Neh. 2:18).
Nisy ny fanoherana masiaka: fanarabiana, famonoana, fanakiviana, fifanarahana, latsa, ary famadihana. Ireo mpanaraby izay zatra nandatsa ireo mpiasa dia nilaza fa handao azy ireo ny Andriamaniny. Fa Nehemia kosa namaly ny fandatsana rehetra tamin'ny Tenin'Andriamanitra (and. 19, 20).
Teo ambanin'ny fitarihan'i Nehemia dia nihorina ny mànda tao anatin'ny 52 andro monja (Neh. 6:15). Na dia ireo fahavalon'ny vahoakan'Andriamanitra aza dia nihaiky fa niaraka tamin'ireo ny Tompo. (and. 16).
Noraisin’i Nehemia tamin’ny Teniny ny vahoaka
Tsy ny biriky na ny tany no nihazona ny loza tsy hitranga tamin'ireo mponina tao. Fa fantatr'i Nehemia fa ny fiarovana marina ho an'ny vahoakan'ny Jerosalema dia ny fanorenana indray ny fon'izy ireo. Nitaona ny olona hiaraka mba hiaino ny Tenin'Andriamanitra izy, izay tsy nisy nanao nandritra ny taona maro izay.
Raha nahatsiaro ny fampitandreman'Andriamanitra ireo, dia nitomany (Neh. 8:1, 8, 9) sady nanao “voady hanaraka ny lalàn'Andriamanitra” (Neh. 10:29). Nampatsiahy azy ireo ny amin'ny fahasoavana sy famindrampon'Andriamanitra i Nehemia sady nanampy, “fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo” (Neh. 8:10).
Koa dia niverina tany amin'ny lapan'ny Persiana i Nehemia. Rehefa niverina tany Jerosalema izy dia hitany ireo vahoaka fa lavo niverin-dàlana indray. Amin'ny maha-mpitarika voafidin'Andriamanitra azy, dia tsy nilentika tao amin'ny asa manokan'ny fanavaozana akory izy raha mbola nitoetra tamin'ireo vahoakany ny fitahian'Andriamanitra.
Nojereny ny olana, toy ny fifanambadiana amin'ireo tsy mpino izay tena zava-doza tokoa (Neh. 13:23-28), ny fahalavoana amin'ny tsy famerenana ampaha-folony sy fanatitra (and. 7-13), ary amin'ny tsy fitandremana ny Sabatan'ny Tompo (and. 15-22). Azony fa na dia nihendrika ho hentitra aza ny fanavaozana sasany nataony, dia manaporofo fitahiana feno fitiavana izany. Ny fampitandreman'Andriamanitra dia tsara mandrakariva ho an'ny ankehitriny sy ny mandrakizainsika.
Manaiky ny antson’Andriamanitra
Mihaina eo amin'ny zoron'ny mandrakizay isika. Andro mahory sy mahatahotra no mandrahona ny filaminantsika. Manahoana re ny ranomason'ireo anjely raha mahita ny toetry ny fiangonana laodikia—vahoaka izay jamban'ny filàny sy ny androm-pahoriana.
“Tsy misy zavatra hatahoran'i Satana lavitra noho ny fanalàn'ny vahoakan'Andriamanitra ny sakana rehetra, ahazoan'ny Tompo mandrotsaka ny Fanahiny ho an'ny fiangonana izay miandry sy tsy menatra Azy. Raha nahita làlana i Satana, dia tsy mba nisy mihitsy ny fifohazana , na kely izany na lehibe, ho amin'ny fara-andro."4
Miantso ny tsirairay amintsika ho tonga iray amin'ireo Mpitarika, hivavaka sy hianatra Soratra Masina miaraka amin'ny hafa, hino toy an'i Nehemia ary hizara izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, ho tonga ohatra amin'ny fitarihana n'aiza n'aiza misy antsika.
Raha nande teny an-dàlana indray andro ity lehilahy iray, dia nosakanana zatovo kristianina iray izay namikitra antontan-taratasy teny an-tànany. Tsy te haneho avy hatrany ny tsy fankasitrahana, nefa dia somary hita ihany ny fahasorenany, noraisiny ilay taratasy ary dia napidiriny tao anaty kitapony.
Kelikely, rehefa tonga tany an-trano izy, dia navoakany ilay taratasy ary nariany tany anaty afo. Diso izy tsy namaky azy mialoha ny nandorany azy. Mialoha kely ny naha may azy manontolo, dia hitany ny fehezan-teny farany eo am-pirehetana mivaky toy izao: “Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay’’ (1 Petera 1:25).
Rehefa nino izy fa ny Andriamanitry ny fahazazany no niresaka tam-pitiavana taminy, dia nametraka ny fiainany teo amin'i Jesosy izy mialoha indrindra ny fahataperan'ny alina!
Ny hery manovan'i Jesosy Kristy izay nahariana izao tontolo izao dia hita ao amin'ny Teniny. Nanome toky Izy fa ny Teniny He promises that His Word “Tsy hiverina amiko foana izy, Raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako” (Isa. 55:11).
Ny Tompontsika dia mila mpitarika izay sahy milaza ny Tenin'Andriamanitra. Ho avy Jesosy, ary nolazaina tamintsika fa ny fihavian'i Kristy dia hialohavan'ny fifohazana am-bavaka, ny famakiana ny Tenin'Andriamanitra, ary ny fanoloran-tena feno ho an'i Jesosy. Manerana izao tontolo izao dia mitombo isa ny famantarana ny firotsahan'ny Fanahy Masina. Mahafinaritra ery ny vanim-potoana toy izao!
Manana safidy atao anefa isika—na tiana na tsy tiana ho mpitarika ho an'i Kristy. Ande ho sokafantsika ho an'ny Mpamonjy antsika ny fontsika, hiaiky ny fahotantsika isika, hanaiky ny heriny izay mahadio antsika, ary hangataka aminy izay faniriany ho antsika. Tsy ho diso amin'ny fitaritana antsika ho amin'izay tokony hisy antsika Izy.
1. Inona no dikan’ny hoe mpitarika marina? Moa ve midika toerana tena ambony ao am-piangonana izany?
2. Ny olona sasany dia mihevitra fa “voa-antso” ho mpanaraka izy fa tsy mpitarika, ary mihevitra fa tsy manana talenta manokana ho atolotra. Inona no ho lazainao amin’ny olona toy izany?
3. Iray amin’ny ireo tsy ambaratelon’ny fahombiazan’i Nehemia ny fahafahana miandry an’ny Tompo hamaly ny vavaka izay ataony amin’ny fotoana mety. Moa ve efa nokolokoloinao izany faharetana sy fahatokiana an’Andriamanitra izany?
Jerry page dia mpitahan-tsoratry ny asa fitoriana anyamin’ny fohibe maneran-tany amin’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro faha-fito.